Famahanam-bilaogy vahiny - Diso izany | Martech Zone
Famahanam-bilaogy vahiny - Diso nataonao izany
Alatsinainy, Aogositra 26, 2013 Alatsinainy, Aogositra 26, 2013 Larry Alton
Indray mandeha, ny backlinks dia nitondra ny tontolon'ny fanatsarana ny motera fikarohana. Rehefa norefesina ny kalitaon'ny tranokala tamin'ny PageRank, ny backlinks dia nanome ny vato notadiavina fatratra izay nitaona ity metrika ity. Saingy rehefa matotra ny algorithman'i Google, dia tsy afaka hijanona amin'ny haben'ny rohy manondro azy fotsiny ny laharan'ny tranonkala iray. Ny kalitaon'ny fampiantranoana an'io tranonkala io dia nanomboka nitondra lanjany bebe kokoa noho ny habetsaky ny rohy azon'ny tranokala iray.
Izany dia niteraka ny fampiharana ny fanoratana bilaogy bilaogy ho an'ny tranonkala hafa. Somary ifotony ny fifampiraharahana; manome ny votoatin'ny tranokala ianao ary manome anao backlink. Na izany aza, toy ny ankamaroan'ny teknikan'ny fananganana rohy, fanararaotana dia mitoraka bilaogy vahiny. Natsangana ny tranonkala tsy misy antony hafa noho ny fampiantranoana ireo vahinin'ny mpitsidika, ireo tranonkala noterena ny olona handefa ny lahatsoratr'izy ireo, ireo olona nanoratra lahatsoratra vahiny dia namokatra fako tsy manome lanja, ary ny famadihana lahatsoratra no nanjary fanao. Fotoana kely fotsiny talohan'ny Google kisendrasendra indray ary nanomboka nandinika ity teknika fananganana rohy ity.
Rehefa navotsotra ny fanavaozana an'i Penguin dia naseho teo aloha sy afovoany ny tetikady fandefasana vahiny maloka; maro ny olona no nilaza izany fa tsy tetika azo iainana intsony ny famahanam-bilaogy vahiny satria tranonkala maro no voasazy noho ny fomba fanaovan'izy ireo bilaogy vahiny.
Vokatr'izany dia nisy orinasa sasany nilavo lefona tamin'ny famoahan'ny mpitsidika rehetra, satria nihevitra izy ireo fa tsy zava-dehibe intsony ny rohy. Na eo aza izany, na eo aza ny zavatra ratsy mety henonao momba ny fiatraikan'ny backlinks amin'ny ezaka SEO anao, dia mbola maninona izy ireo. Raha ny marina dia zava-dehibe izy ireo. Araka ny Searchmetrics 2013 Fahaizana mamaritra,
"Ny rohy backlink dia mitohy ho iray amin'ireo metrika SEO manan-danja indrindra. Amin'izay lafiny izay, kely ny niova nandritra ny taona maro: ny tranonkala misy rohy miverina misimisy kokoa dia milahatra tsara kokoa. ”
Ny tena marina dia ny paikadin'ny bilaogy vahiny dia tetikady marketing manan-danja sy mahomby hatrany, saingy rehefa vita amin'ny fomba tsara.
Mampalahelo fa mbola sarotra amin'ny olona ny mahatakatra ny fomba mety hizorana amin'ny famoahana vahiny. Na eo aza ireo torolàlana maro izay manome drafitra fahombiazana, dia mbola tsy azon'izy ireo ihany. Manao izany hadisoana izany hatrany hatrany izy ireo. Ho an'ireo izay mahazo tombony bebe kokoa amin'ny tsy ohatra, ireto ny sasany amin'ireo fomba tsy mety ataon'ny olona momba ny fitorahana bilaogy vahiny.
Manapaka zoro amin'ny kalitao
Ny lesoka matetika hitako dia tsy ampy ny kalitaon'ny atiny atolotry ny olona amin'ny lahatsoratr'ireo vahininy.
Na aiza na aiza no hametrahanao ny atiny dia misy ny anaranao eo. Izy io dia maneho ny marikao, ka raha mila marika fakan-tahaka ianao dia mila fakan-tahaka ny atiny. Raha niverina ny rehetra fa ny olona rehetra dia ny backlink, ny atiny ho an'ny vahinin'ireo mpitsidika dia novokarin'ireo mpamokatra votoaty izay nandoko lahatsoratra tsy misy dikany mba hisorohana ny sazy famerenana.
Rehefa navoaka tao amin'ny tranokala tsy misy fatra firy ity karazana atiny ity dia tsy dia nanam-potoana firy hanimbana ny lazan'ilay marika ianao. Amin'izao fotoana izao dia tokony hiasa amin'ny fomba samihafa ho anao ny lahatsoratry ny vahininao. Ny fametrahana ireo hafatrao vahininao amin'ny karazana tranokala mety dia midika fa ho hitan'ny olona izy ireo ary hamorona hevitra momba anao mifototra amin'ny zavatra novakiany.
Misafidy ireo toerana diso
Talohan'ny Penguin, ny fampiharana ny bilaogy vahiny dia tsy nifantoka loatra tamin'ny kalitaon'ny tranonkala fampiantranoana. Natolotra ny toeram-pambolena sy ny lahatahiry lahatsoratra ny lahatsoratra satria ny backlink ihany no zava-dehibe. Post Penguin, ireo tranonkala izay nanao izany dia matetika no voasazy. Tsy ny fanaintainana ny valin'ny fikarohana ihany no nandratra, fa io fisainana io koa dia tsy nahita. Ny famahanam-bilaogy vahiny dia manokatra varavarana amin'ireo fotoana hafa ahafahana manao backlink hafa.
Rehefa navoaka tao amin'ny tranokala hajaina eo amin'ny sehatry ny indostria ny lahatsoratry ny vahininao ary manana vondrom-piarahamonina marobe ny zavatra vahininao dia manao zavatra vitsivitsy ho anao:
Mampiroborobo ny fahatsiarovan-tena amin'ireo mety ho vinavina
Manangana anao ho manam-pahaizana momba ny indostria / akany
Mampiorina ny fahatokisanao ny marikao izany
Ny tranonkala iray misy vondrom-piarahamonina midadasika sy mavitrika koa dia manana tratra bebe kokoa. Ireo mpamaky dia mazàna mizara votoaty tsara, ary mety hitsidika ny tranokalanao izy ireo, hampitombo ny fivezivezena amin'ny kalitaon'ny referral.
Ny fandrefesana ny kalitaon'ny tranokala dia azo atao amin'ny fanamarinana ireo mari-pahaizana momba ny tranokala marobe. Raha toa ny tanjonao dia ny mandefa amin'ny tranokala misy fifamoivoizana betsaka, ny tranonkala iray manana laharana Alexa ambany dia ho lasibatra tsara. Raha mila tranonkala iray handalo sanda SEO bebe kokoa ianao avy amin'ny rohy, dia te hitady tranokala manana Domain Authority avo lenta ianao. Raha ny tokony ho izy dia te hiezaka ianao hanatratra tranonkala isan-karazany. Bebe kokoa momba izany ao amin'ny fizarana manaraka.
Tsy fahampian'ny fahasamihafana
Ny iray amin'ireo olana amin'ny backlinks dia ny fahazoana azy ireo azo mandeha ho azy. Amin'ny alàlan'ny fandefasana lahatahiry, manaova spam amin'ny bilaogy hafa ary na amin'ny alàlan'ny fandefasana vahiny. Raha hitady tranokala izay tsy manamboatra backlinks voajanahary, ny motera fikarohana dia mitady tondro toy ny:
Lahatsoratra vatofantsika nohamafisina loatra
Dofollow marobe tsy mifandanja raha oharina amin'ny rohy nofollow
Rohy marobe ambany kalitao ambany
Ny fandefasana vahiny dia ahafahanao manangana mombamomba ny rohy voadidy tsara. Ny bilaogy sasany dia hamela anao hampiditra rohy ao amin'ny vatan'ny hafatrao, fa ny hafa kosa mety hitaky ny hametrahanao rohy ao amin'ny bio mpanoratra anao fotsiny. Fomba iray hafa hanamafisana ireo rohy dia ny fanovana ny endrik'ilay vatofantsika. Ny fampiasana teny sy andian-teny izay tsy mora ekena sy mahasoa ny teny lakile fitadiavana dia hahatonga ny zavatra ho voajanahary kokoa.
Paikady iray hafa ny famoahana lahatsoratra amin'ny bilaogy izay tsy ao amin'ny indostriao na any amin'ny faritra misy anao, saingy mitovitovy ihany. Ohatra, raha orinasa fiantohana ianao dia afaka manoratra lahatsoratra vahinin'ny mpitsidika bilaogy momba ny fahasalamana sy ny fahasalamana mifandraika amin'ny fomba hampihenan'ny vidim-piainana sy ny fahasalamana ny vidin'ny fiantohana ain'olona. Ny tranonkala iray mivarotra solosaina dia afaka manatona bilaogy mifantoka amin'ny filaminan'ny solosaina. Ny fampidirana ireo vahinin'olom-bitika eo amin'ny portfolio-nao dia tsy vitan'ny manampy amin'ny fanamorana ny rohy fotsiny, fa manampy anao koa hampiharihary ny marikao amin'ny mpihaino vaovao.
Ny fandefasana vahiny dia tsy vitan'ny hoe manampy ny tranonkalanao fotsiny; afaka manampy anao hanangana fifandraisana matanjaka amin'ny olon-kafa ao amin'ny indostranao izy io. Vakio ireo bilaogy tianao hiaraha-miasa ary alefaso amin'ny tompona fampidirana fampidirana sy famahanana bilaogy ho an'ny tompony.
Lazao azy ireo ny zavatra tianao hosoratana sy ny fahaizanao manampahaizana amin'io lohahevitra io. Ny lehibe indrindra, aza matahotra ny milaza azy ireo ny antony tianao hanoratana ho an'ny tranonkalany. Ny fanaovana ny marina dia mampahafantatra azy ireo fa tsy manandrana milalao ny rafitra ianao, fa aleo manangana ny orinasanao nefa mandray anjara tsara amin'ny azy ireo.
Tags: mamorona atinybilaogy vahinyFomba fanao tsara indrindra amin'ny bilaogy vahinyFanavaozana Penguin
Aug 27, 2013 amin'ny 1: 07 AM
Sombiny miavaka. Ny bilaogy vahiny dia mety ho fomba mahafinaritra hampitomboana ny fitarihana eritreritrao eo amin'ny sehatra misy anao…raha hainao ny manao izany tsara. Misaotra amin'ny torohevitra!
Aug 27, 2013 amin'ny 7: 59 AM
Mahafantatra tsara. Mandray hafatra avy amin'ny vahiny matetika ny bilaoginay, saingy tery izahay amin'ny kalitao sy rohy miverina. Antenaina fa ny fifantohana amin'ny kalitao dia hanakana antsika tsy hitovy amin'ny maha-izy antsika: bilaogy miezaka manome lanja ny mpamaky.
Aug 27, 2013 amin'ny 10: 18 AM
Tadiavo ny vondrona niche tianao haleha ary avy eo mahita ny toerana mety. Torohevitra lehibe. Heveriko fa mety hisy tsiro ratsy ao am-bavany ny olona amin'izao fotoana izao momba ny bilaogy vahiny satria manana olona marobe ianao izay te-hanana toerana vahiny fotsiny mba hahafahany mametaka ny bilaoginy feno rohy. Fampahalalana lehibe no tadiavin'ny olona, ​​fa tsy ny rohy, raha manome votoaty lehibe ianao dia mety te hikaroka anao ihany koa ny olona.
Aug 27, 2013 amin'ny 10: 35 AM
Manaiky! Miady amin'ny backlinkers manandrana miditra amin'ny tranokalanay foana izahay. Nanomboka tsy nanaraka ny rohy rehetra amin'ny lahatsoratra izahay – manampy izany.
Aug 29, 2013 amin'ny 5: 59 AM
Tena nahafinaritra ahy ny namaky ny lahatsoratrao Larry… Misaotra nizara!
Aug 29, 2013 amin'ny 6: 55 AM
Torohevitra lehibe Larry. Ataovy azoko antoka ihany koa fa manana lahatsoratra am-polony farafahakeliny ao amin'ny bilaogiko aho alohan'ny hanombohako bilaogy vahiny. Na inona na inona latsaka noho izany dia midika fa ireo mpamaky izay sarihiko avy amin'ny bilaogy hafa dia hiala amin'ny fahadisoam-panantenana ary mety tsy hiverina intsony.
Aug 29, 2013 amin'ny 9: 22 AM
Torohevitra mahafinaritra! Matetika izahay no gaga amin'ny hoe firy ny orinasa mampiroborobo ny tranokalany toy ny adala… ary tsy misy vaovao na fahafahana mifandray amin'ny orinasa rehefa tonga any ny olona!